Tababaraha Xulka Qaranka Brazil Oo Jeclaan Lahaa In Xiddig Ingiriis Ah Uu U Ciyaaro Xulka Brazil - Laacib
HomeCiyaaro CaalamiTababaraha Xulka Qaranka Brazil Oo Jeclaan Lahaa In Xiddig Ingiriis Ah Uu U Ciyaaro Xulka Brazil
Tababaraha Xulka Qaranka Brazil Oo Jeclaan Lahaa In Xiddig Ingiriis Ah Uu U Ciyaaro Xulka Brazil
Tababaraha xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa amaan kula dul-dhacay xiddiga da’da yar ee Arsenal ee Bukayo Saka oo uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu qayb ka noqdo xulka qaranka Brazil si uu ugu xusho Koobka Adduunka.
Tite oo ahaa tababaraha xulka Brazil tan iyo sannadkii 2015, ayaa waxa uu xulka qarankiisa si joogto ah ugu darayay difaaca Arsenal ee Gabriel Magalhaes iyo sidoo kale garabka weerarka ee kooxdaas ee Gabriel Martinelli 12kii bilood ee ugu dambeeyey, hase yeeshee waxa uu isagana jeclaan lahaa inuu soo qaato Bukayo Saka oo Ingiriis ah.
Wargeyska The Times ayaa tababaraha weydiiyey, in uu jiro ciyaartoy reer England ah oo uu jeclaan lahaa in uu xulkiisa Brazil ku darsado, waxaanu ku jawaabay: “Waxa aan qaadan lahaa Bukayo Saka oo xilli ciyaareedka ku dhamaystay isaga oo 11 gool oo Premier League ah dhaliyey.
“Waxa uu leeyahay orod badan, lugo dhuudhuuban. Waa nooc ka mid ah ciyaartoyda ay adag tahay in la xakameeyo. Waad isku dayi kartaa in aad cadaadis saarto, in aad eryato meel kasta oo uu tago, laakiin marna ma xakamayn kartid ficillada uu samaynayo.”
Bukayo Saka ayaa ka mid noqday ciyaartoyda xulka qaranka England ee maanta uu shaaciyey Gareth Southgate, waxaana uu filayaa inuu qayb ka noqon doono xulka qaranka England ee ka qayb-geli doona koobka Adduunka ee dhamaadka sannadkan lagu qaban doono waddanka Qatar.